သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အားကိုးစားခြင်း | Worldwide Church of God Switzerland | Worldwide Church of God Switzerland
ဆောင်းပါး > သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် > သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်ယုံကြည်စိတ်ချ
လွန်ခဲ့သောအနှစ် ၂၀ ကသူနှစ်ခြင်းခံခဲ့သောအဓိကအကြောင်းရင်းမှာသူသည်သူ၏အပြစ်အလုံးစုံကိုကျော်လွှားနိုင်ရန်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏တန်ခိုးကိုရလိုသောကြောင့်ဖြစ်သည်ဟုကျွန်ုပ်တို့၏အကြီးအကဲတစ် ဦး ကမကြာသေးမီကပြောခဲ့သည်။ သူ၏ရည်ရွယ်ချက်များသည်ကောင်းမွန်သော်လည်းသူ၏နားလည်မှုမှာအတော်အတန်ချို့ယွင်းချက်ရှိသည် (နားလည်မှုလွဲမှားခြင်းများရှိသော်လည်းဘုရားသခင်၏ကျေးဇူးတော်အားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ကယ်တင်ခြင်းမခံရပါ။
သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ "အောင်မြင်သူပန်းတိုင်များ" ကိုရရှိရန် ရိုးရှင်းစွာ "ဖွင့်" နိုင်သော အရာမဟုတ်သကဲ့သို့ ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်အားထက်သန်မှုအတွက် စူပါအားသွင်းကိရိယာတစ်မျိုးဖြစ်သည်။ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် ဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူသည်၊ ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူရှိတော်မူသည်၊ ကျွန်ုပ်တို့၌ရှိတော်မူသည်၊ ခမည်းတော်သည် ကျွန်ုပ်တို့အတွက် ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၊ သေချာမှုနှင့် ရင်းနှီးသောမိတ်သဟာယကို ပေးတော်မူ၏။ ခမည်းတော်ခရစ်တော်အားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အား သူ၏သားသမီးများကို ဖန်ဆင်းခဲ့ပြီး သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့အား ဤအရာကိုသိရန် ဝိညာဏသဘောကို ပေးသည် (ရောမ 8,16) သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့အား ခရစ်တော်အားဖြင့် ဘုရားသခင်နှင့် ရင်းနှီးသောမိတ်သဟာယကို ပေးစွမ်းသော်လည်း ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်ပြုနိုင်စွမ်းကို ပျက်ကွက်ခြင်းမရှိပါ။ မှားယွင်းသော ဆန္ဒများ၊ မှားယွင်းသော စေ့ဆော်မှု ၊ မှားယွင်းသော အတွေးအမြင် ၊ မှားသော အကျင့် ၊
သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏အသက်တာတွင်အမှန်တကယ်အလုပ်လုပ်သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်နိုင်ပါသလား။ အထူးသဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အလွန်ကောင်းသောခရစ်ယာန်များမဟုတ်သောကြောင့်ဘာမျှမဖြစ်ပျက်ပုံမပေါ်ပါက ကျွန်ုပ်တို့သည်အပြစ်နှင့်ဆက်လက်ရုန်းကန်နေပါကလုံးဝပြောင်းလဲမှုမရှိဟုထင်ရလျှင်၎င်းသည်ပြbrokenနာကိုဘုရားသခင်မဖြေရှင်းနိူင်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့အလွန်စိတ်ပျက်အားလျော့နေပြီဟုကျွန်ုပ်တို့ကောက်ချက်ချပါသလား။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ခရစ်တော်ထံသို့ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ရောက်လာသောအခါကျွန်ုပ်တို့သည်ဒုတိယမွေးခြင်းခံရပြီးခရစ်တော်ကထပ်မံဖန်ဆင်းသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ခရစ်တော်၌အသစ်သောလူသစ်များ၊ ကလေးငယ်များဖြစ်ကြသည်။ ကလေးများသည်ခွန်အားမရှိ၊ ကျွမ်းကျင်မှုလည်းမရှိ၊ မိမိတို့ကိုယ်ကိုမသန့်ရှင်းကြပါ။
သူတို့ကြီးပြင်းလာသည်နှင့်အမျှကျွမ်းကျင်မှုအချို့ရရှိကြပြီးသူတို့မတတ်နိုင်သောအရာများစွာရှိသည်ကိုစတင်သဘောပေါက်လာကြပြီးတစ်ခါတစ်ရံစိတ်ပျက်စရာများဖြစ်လာသည်။ သူတို့သည် crayons များနှင့်ကတ်ကြေးများဖြင့်တီးခတ်ကြသည်။ အရွယ်ရောက်သူတစ် ဦး အနေဖြင့်၎င်းကိုမလုပ်နိုင်ဟုစိုးရိမ်ကြသည်။ ဒါပေမယ့်စိတ်ပျက်မှုတွေကမကူညီနိုင်ဘူး၊ အချိန်နဲ့လေ့ကျင့်မှုတွေကသာကူညီလိမ့်မယ်။
၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဝိညာဉ်ရေးအသက်တာနှင့်လည်းသက်ဆိုင်သည်။ တစ်ခါတစ်ရံခရစ်ယာန်လူငယ်များသည်မူးယစ်ဆေးစွဲခြင်းသို့မဟုတ်စိတ်ဆိုးခြင်းများကိုရပ်တန့်ရန်အလွန်အစွမ်းထက်သည်။ တစ်ခါတစ်ရံခရစ်ယာန်လူငယ်များသည်ဘုရားကျောင်းအတွက်“ ဘဏ္"ာ” တစ်ခုဖြစ်သည်။ အများကြီးမကြာခဏပြီးနောက်, ခရစ်ယာန်များသည်ယခင်ကဲ့သို့တူညီသောအပြစ်များကိုအတူတိုက်, ပုံတူအတူတူပင်ကြောက်ရွံ့သောသဘောနှင့်စိတ်ပျက်အတူတူပင်ပုံရသည်။ သူတို့သည်ဝိညာဉ်ရေးရာကုမ္ပဏီကြီးများမဟုတ်ပါ။
သခင်ယေရှုသည် အပြစ်ကို အောင်နိုင်ခဲ့သည် ဟု ကျွန်ုပ်တို့ပြောနေကြသော်လည်း၊ အပြစ်က ကျွန်ုပ်တို့အား ၎င်း၏ တန်ခိုး၌ ရှိနေသကဲ့သို့ ဖြစ်နေပုံရသည်။ ကျွန်ုပ်တို့အတွင်း၌ရှိသော အပြစ်သဘောသဘာဝသည် ရှုံးနိမ့်သွားသော်လည်း၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် သူ၏သုံ့ပန်းများကဲ့သို့ ကျွန်ုပ်တို့ကို ဆက်ဆံဆဲဖြစ်သည်။ အိုး ငါတို့က ဘယ်လိုလူဆိုးတွေလဲ။ ကျွန်ုပ်တို့ကို အပြစ်နှင့်သေခြင်းမှ မည်သူက ကယ်တင်မည်နည်း။ ဟုတ်ပါတယ် (ရောမ 7,24စာ-၂၅)။ သူအနိုင်ရပြီးပြီ၊ သူကလည်း ငါတို့အနိုင်ရအောင် လုပ်ထားတယ်။
ဒါပေမယ့် ပြီးပြည့်စုံတဲ့ အောင်ပွဲတော့ မတွေ့သေးဘူး။ သေခြင်းအပေါ် သူ၏တန်ခိုးကို ကျွန်ုပ်တို့မမြင်ရသေးသလို၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ဘဝတွင် အပြစ်၏အဆုံးသတ်ခြင်းကို ကျွန်ုပ်တို့မမြင်ရသေးပါ။ ဟီး 2,8 ငါတို့ခြေထောက်အောက်မှာ လုပ်သမျှအရာအားလုံးကို ငါတို့မတွေ့သေးဘူးလို့ပြောတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ဆောင်သည့်အရာ - ကျွန်ုပ်တို့သည် ယေရှုကို ယုံကြည်သည်။ သူအောင်ပွဲရခဲ့တယ်လို့ သူ့နှုတ်ကပတ်တော်ကို ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ပြီး သူ့မှာလည်း အောင်ပွဲခံရတယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ခရစ်တော်၌သန့်ရှင်းစင်ကြယ်ကြောင်းကျွန်ုပ်တို့သိသော်လည်းကျွန်ုပ်တို့၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအပြစ်များကိုကျော်လွှားနိုင်ရန်တိုးတက်မှုကိုမြင်တွေ့လိုကြသည်။ ဤဖြစ်စဉ်သည်တစ်ခါတစ်ရံအလွန်နှေးကွေးနေပုံရသော်လည်းကျွန်ုပ်တို့သာမကအခြားသူများတွင်ပါကတိထားတော်မူသောဘုရားသခင်ကိုကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်စိတ်ချနိုင်သည်။ ပြီးနောက်ရှိသမျှတို့, ငါတို့အလုပ်မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါဟာသူ့အစီအစဉ်မဟုတ်ဘဲ၊ ဘုရားသခင်ထံကျွန်ုပ်တို့လက်အောက်ခံပါကကိုယ်တော့်ကိုစောင့်ဆိုင်းရန်လိုလိုလားလားရှိရမည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်သူ၏အလုပ်ကိုကျွန်ုပ်တို့အားသူမှန်ကန်သည်ဟုသူထင်သောအရှိန်နှင့်မြန်ဆန်စွာလုပ်ဆောင်ရန်ယုံကြည်ရန်လိုလိုလားလားရှိရမည်။
ဆယ်ကျော်သက်များသည် ဖခင်ထက် ပိုသိသည်ဟု ထင်မြင်လေ့ရှိသည်။ ဘဝဆိုတာ ဘာလဲဆိုတာ သိပြီး အရာရာတိုင်းကို သူတို့ဘာသာ ကောင်းကောင်းလုပ်နိုင်တယ် (ဒါပါပဲ၊ ဆယ်ကျော်သက်တွေအားလုံးက ဒီလိုမျိုးမဟုတ်ပေမယ့် ပုံသေပုံစံက အထောက်အထားအချို့ကို အခြေခံထားတာပါ)။
ကျွန်ုပ်တို့ခရစ်ယာန်များသည်တခါတရံဆယ်ကျော်သက်များနှင့်ဆင်တူသည့်နည်းဖြင့်စဉ်းစားနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ၀ ိညာဉ်ရေးရာ“ ကြီးပြင်းခြင်း” သည်မှန်ကန်သောအပြုအမူများပေါ်တွင်အခြေခံသည်ဟုကျွန်ုပ်တို့စတင်စဉ်းစားမိပေမည်၊ ၎င်းသည်ဘုရားသခင်ရှေ့တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏အနေအထားသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ပြုမူပုံအပေါ်တွင်မူတည်သည်ဟုကျွန်ုပ်တို့အားထင်မြင်စေသည်။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကောင်းမွန်စွာပြုမူလျှင်၊ ကျွန်ုပ်တို့ကဲ့သို့မကောင်းသောအခြားလူများကိုအထင်သေးရန်သဘောထားပြနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကောင်းမွန်စွာမပြုမူပါကကျွန်ုပ်တို့သည်စိတ်ပျက်အားလျော့။ စိတ်ဓာတ်ကျနိုင်သည်။ ဘုရားသခင်သည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုစွန့်ပစ်ခဲ့သည်ဟုယုံကြည်နိုင်သည်။
သို့ရာတွင်၊ ရှေ့တော်၌ မိမိကိုယ်ကို ဖြောင့်မတ်စေခြင်းငှာ ဘုရားသခင်သည် ငါတို့ကို တောင်းတော်မမူ။ မတရားသောသူတို့ကို ဖြောင့်မတ်ရာသို့ လွှတ်တော်မူသောအရှင်၊ 4,5) ငါတို့ကိုချစ်၍ ခရစ်တော်ကြောင့် ငါတို့ကို ကယ်တင်သောသူ။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ခရစ်တော်၌ ရင့်ကျက်လာသည်နှင့်အမျှ ကျွန်ုပ်တို့အား ခရစ်တော်၌ အမြင့်မြတ်ဆုံးသော နည်းလမ်းဖြင့် ထုတ်ဖော်ပြသသည့် ဘုရားသခင်၏ ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၌ ကျွန်ုပ်တို့ ပို၍ ခိုင်မြဲစွာ အနားယူပါသည်။1. ဂျိုဟန် 4,9) ကျွန်ုပ်တို့သည် ကိုယ်တော်၌တည်နေသကဲ့သို့၊ ဗျာဒိတ်ကျမ်း ၂ တွင်ဖော်ပြမည့်နေ့ရက်ကို ကျွန်ုပ်တို့ စောင့်မျှော်နေပါသည်။1,4 “ထိုအခါ ဘုရားသခင်သည် သူတို့၏မျက်စိမှ မျက်ရည်အားလုံးကို သုတ်တော်မူမည်ဖြစ်ပြီး၊ နောက်တဖန် သေခြင်းရှိတော့မည်မဟုတ်၊ ဝမ်းနည်းခြင်း၊ အော်ဟစ်ခြင်း၊ နာကျင်ခြင်းလည်း ရှိမည်မဟုတ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ပထမ ဆုံးသွားပြီ။"
ထိုနေ့ရောက်သောအခါ၊ ပေါလုက၊ ငါတို့သည် တခဏချင်း ပြောင်းလဲရလိမ့်မည်ဟု မိန့်တော်မူ၏။ ငါတို့သည် မသေနိုင်သော၊ မသေနိုင်သော၊ မဖောက်ပြန်နိုင်သော (မသေနိုင်သော၊1. ကော ၁5,5၂-၅၃)။ ဘုရားသခင်သည် အပြင်လူကိုသာမက အတွင်းလူကို ရွေးနုတ်သည်။ ကိုယ်တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ အတွင်းအကျဆုံးဖြစ်တည်မှုအား အားနည်းခြင်းနှင့် မမြဲခြင်းမှ ဘုန်းတန်ခိုးနှင့် အရေးကြီးဆုံးမှာ အပြစ်ကင်းခြင်းကို ပြောင်းလဲပေးတော်မူ၏။ နောက်ဆုံး တံပိုးမှုတ်သောအခါ၊ ငါတို့သည် တခဏချင်း ပြောင်းလဲသွားလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ခန္ဓာသည် ရွေးနှုတ်ခြင်းခံရသည် (ရောမ 8,23ထို့ထက်မက၊ ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့အား ခရစ်တော်၌ မည်ကဲ့သို့ ဖန်ဆင်းခဲ့သည်ကို ကျွန်ုပ်တို့ နောက်ဆုံးတွင် တွေ့မြင်ရလိမ့်မည်။1. ဂျိုဟန် 3,2) ထို့နောက် ဘုရားသခင်သည် ခရစ်တော်၌ အမှန်တကယ် ဖန်ဆင်းခဲ့သော မျက်မြင်မရသေးသော အဖြစ်မှန်ကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း မြင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ခရစ်တော်အားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ အပြစ်တရားဟောင်းသည် အနိုင်ယူပြီး ဖျက်ဆီးခံခဲ့ရသည်။ ဧကန်စင်စစ် သူမသည် သေပြီဟု ပေါလုဆိုသည်– “သင်တို့သည် အသေခံ၍ ဘုရားသခင်၌ ခရစ်တော်နှင့်အတူ ဝှက်ထားလျက်ရှိ၏” (ကော. 3,3) ကျွန်ုပ်တို့အား “အလွယ်တကူ မျိုသိပ်” ကာ “ဖယ်ရှားရန်ကြိုးစား” သည့် အပြစ် (ဟေဗြဲ ၁း၁၊2,1) ဘုရားသခင်အလိုတော်အတိုင်း ကျွန်ုပ်တို့သည် ခရစ်တော်၌ရှိသော လူသစ်၏အစိတ်အပိုင်းမဟုတ်ပါ။ ခရစ်တော်၌ ကျွန်ုပ်တို့သည် အသစ်သောအသက်တာရှိသည်။ ခရစ်တော်ကြွလာသောအခါ၊ ငါတို့သည် ခရစ်တော်၌ ငါတို့ကို ခမည်းတော်၌ ဖန်ဆင်းတော်မူသည်နှင့်အညီ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏အစစ်အမှန်အသက်တာဖြစ်သည့် ခရစ်တော်၌ စုံလင်သူအဖြစ် ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်ကိုကိုယ် အမှန်မြင်ရလိမ့်မည် (ကောလောသဲ 3,3စာ-၄)။ ဤအကြောင်းကြောင့်၊ ငါတို့သည် အသေခံပြီး ခရစ်တော်နှင့်အတူ ထမြောက်ပြီးသောကြောင့်၊ ငါတို့၌ရှိသော မြေကြီးနှင့်ဆိုင်သောအရာကို ငါတို့သည် “သတ်” သည် (း၅)။
ကျွန်ုပ်တို့သည် စာတန်နှင့် အပြစ်နှင့်သေခြင်းကို သိုးသငယ်၏အသွေးအားဖြင့် တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းဖြင့် အောင်နိုင်သည် (ဗျာဒိတ် ၁ ကော၊2,11) သခင်ယေရှုခရစ်၏ လက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်တွင် အောင်ပွဲခံခြင်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် အပြစ်နှင့်သေခြင်းအပေါ် အောင်ပွဲခံခြင်းဖြစ်သည်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် အပြစ်နှင့်ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သော ကျွန်ုပ်တို့၏ရုန်းကန်မှုအားဖြင့်မဟုတ်ပေ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ အပြစ်ကို တွန်းလှန်ခြင်းသည် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်၏ ရန်သူများ မဟုတ်တော့ဘဲ၊ ဘုရားသခင်နှင့် ဆက်ဆံသော သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့၌ ဘုရားသခင်အလိုတော်နှင့် ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့၌ လုပ်ဆောင်ပေးသော ခရစ်တော်၌ ရှိနေသည်ဟူသော အချက်ကို ဖော်ပြခြင်း ဖြစ်သည်။ ဝမ်းသာပါတယ် (ဖိလိပ္ပိ 2,13).
ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်ကို တိုက်ထုတ်ခြင်းသည် ခရစ်တော်၌ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းအတွက် အကြောင်းပြချက်မဟုတ်ပါ။ သန့်ရှင်းခြင်းကို မထုတ်လုပ်တတ်။ ခရစ်တော်၌ ကျွန်ုပ်တို့အပေါ်ထားရှိသော ဘုရားသခင်၏ ကိုယ်ပိုင်မေတ္တာနှင့် ကောင်းမြတ်ခြင်းသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းအတွက် အကြောင်းပြချက်၊ တစ်ခုတည်းသော အကြောင်းပြချက်ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်သည် ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့် ကျေးဇူးတော်နှင့် ပြည့်နှက်နေသောကြောင့်၊ အခြားအကြောင်းမရှိဘဲ ခရစ်တော်အားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် အပြစ်နှင့် ကင်းစင်သော ဘုရားသခင်မှ ရွေးနှုတ်တော်မူသော ဖြောင့်မတ်ခြင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ အပြစ်ကို တွန်းလှန်ခြင်းသည် ခရစ်တော်အားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အား ပေးဆောင်ခဲ့သော ဖြောင့်မတ်ခြင်းအသစ်၏ ရလဒ်ဖြစ်ပြီး ယင်း၏အကြောင်းရင်းမဟုတ်ဘဲ၊ ခရစ်တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်ရှိစဉ်က ကျွန်ုပ်တို့အတွက် အသေခံတော်မူခဲ့သည် (ရောမ 5,8).
ကျွန်ုပ်တို့သည် အပြစ်ကိုမုန်းသည်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် အပြစ်ကိုဆန့်ကျင်သည်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့အတွက်သာမက အခြားသူတို့အတွက်ပါ အပြစ်ဖြစ်စေသော နာကျင်မှုဝေဒနာများကို ရှောင်ရှားလိုပါသည်။ ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့ကို ခရစ်တော်၌အသက်ရှင်စေခဲ့ပြီး သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့၌အလုပ်လုပ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ခရစ်တော်၌ရှိသောကြောင့် “ကျွန်ုပ်တို့ကို အလွယ်တကူ ချည်နှောင်” စေသော အပြစ်ကို တိုက်ထုတ်သည် (ဟေဗြဲ ၁း၁)2,1) သို့သော် ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်ဖွင့်ပေးသော ကြိုးပမ်းမှုများအားဖြင့်ပင် ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်အားထုတ်မှုများမှတစ်ဆင့် အောင်ပွဲမရရှိပါ။ ခရစ်တော်၏အသွေးတော်အားဖြင့်၊ ငါတို့အတွက်ကြောင့် လူ့ဇာတိခံယူသောဘုရားသခင်၏ လူ့ဇာတိခံယူသောဘုရားသခင်၏သားတော်အဖြစ်၊ သူ၏အသေခံခြင်းနှင့် ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းမှတဆင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် အောင်ပွဲရရှိကြသည်။
ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ကယ်တင်ခြင်းအတွက် လိုအပ်သောအရာအားလုံးကို ခရစ်တော်၌ပြုထားပြီးဖြစ်ပြီး၊ ကျွန်ုပ်တို့အတွက် လိုအပ်သောအရာအားလုံးကို ခရစ်တော်၌သိရန် ခရစ်တော်၌ခေါ်ဆိုခြင်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အား အသက်နှင့် သစ္စာစောင့်သိရန် လိုအပ်သောအရာအားလုံးကို ပေးထားပြီးဖြစ်သည်။ အံ့သြစရာကောင်းလွန်းတာကြောင့် ဒီလိုလုပ်ခဲ့တာပါ (2. ပေတရု ၁:၂-၃)။
ဗျာဒိတ်ကျမ်းကအော်ဟစ်ခြင်း၊ မျက်ရည်ကျခြင်း၊ ဆင်းရဲခြင်းဝေဒနာနှင့်နာကျင်ခြင်းမရှိတော့မည့်အချိန်ရောက်လာလိမ့်မည်ဟုပြောထားသည်။ ၎င်းသည်အပြစ်တရား၊ စေ၏။ ရုတ်တရက်ခဏလေးတွင်အမှောင်ထုသည်နိဂုံးချုပ်သွားပြီးအပြစ်ကကျွန်ုပ်တို့ကိုသူ၏အကျဉ်းသားများအဖြစ်ထင်မြင်ယူဆလာအောင်မလုပ်နိုင်တော့ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏စစ်မှန်သောလွတ်လပ်မှု၊ ခရစ်တော်၌ရှိသောကျွန်ုပ်တို့၏အသက်တာသစ်သည်သူနှင့်အတူသူ၏ဘုန်းအသရေတော်၌ထာဝရထွန်းလင်းလိမ့်မည်။ ဤအချိန်အတောအတွင်းကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်း၏ကတိတော်များကိုယုံကြည်စိတ်ချကြသည် - ၎င်းသည်၎င်းကိုအမှန်တကယ်စဉ်းစားရန်အလွန်အရေးကြီးသည်။